Tallaalka lagaga hortago cudurada faafa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tallaalka lagaga hortago cudurada faafaFoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / TT
Tallaalka lagaga hortago cudurada faafa
La daabacay onsdag 7 januari 2015 kl 13.26
Tallaalka lagaga hortago cudurada faafa ee infuluwansaha loo yaqaano ayaan saamayn fiican yeelan. Tallaalkan ayaan dili karayn ama ka adkay 13 ka mid ah 15 fayras ee ay Sweden ogaatay in ay faafiyaan hargabka infuluwansaha loo yaqaano.
- Ilaa hadda ma ogin waxtarka uu leeyahay tallaalkani. Laakiinse haddana waxa uu badbaado kooban siinayaa qofka is tallaala.
Tallaalka ka hortaga cudurada faafa ee Sweden laga isticmaalaa waa mid sannad kasta la jaanqaada hadba nooca fayraska wada cudurada faafa, laakiin warbixin cusub oo laga soo saaray dalka Maraykanka ayaa muujinaysa in tallaalka xilli-sannadeedkan la diyaariyay aanu ka hortag fiican u noqon karin fayrasyada halkaasi ka jira.
Ilaa hadda waxa la ogaaday in tallaalka ka hortaga fayraska hargabka keenaa aanu dilayn ama saamaynayn 13 ka mid ah 15 fayras ee Sweden lagu arkay. Laakiinse diktoor Anders tegnell ayaa tan u arka xaalad caadi ah, waxaanu soo jeediyay in uu tallaalkani wax la'aanta dhaamo, loona baahan yahay in ay dadku istallaalaan.
- Sannaddada qaar tallaalkani waxa uu dhalaa natiijo fiican, halka uu mararka qaarna ka noqdo mid aan ka hortag fiican yeelan oo aan u dhicin sidii la filayay. Laakiinse haddana ilaa hadda waxa uu leeyahay ka hortag, inkasta oo aanu wax u badbaadinayn sidii la filayay.
Kaasi waxa uu ahaa Anders Tegnell oo ah dhakhtar ku xeeldheer cudurada faafa kana hawlgala haayadda caafimaadka bulshada.
Anders Tegnell waxa uu sheegay in la filayo in dhammaadka bisha janaayo iyo bisha febraayo uu hargabkani faafi doono, waxa se uu sheegay in ay adag tahay in hadda qiimayn lagu sameeyo qiyaasta uu hargabkaasi gaadhi doono. Dhanka kale waxa uu diktoorku sheegay in xarumaha dalkani Iswiidhan ay diyaar u yihiin sidii ay daryeel caafimaad u siin lahaayeen dadka uu ku dhaco hargabkani.
- Haddii uu hargabkani faafo, waxa ay noqon kartaa dhibaato. Ilaa hadda ma ogin sida ay noqon doonto. Waxa si waajib ah in la diyaariyo wixii tallaal ah si dawo loo siiyo dadka uu xannuunkani haleelo. Wax kastaaba waa diyaar, waxaan jirta fursad wax lagaga qaban karo muddo kooban. Sidaasi waxa yidhi diktoor Anders Tegnell oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa.
Haayadda caafimaadka bulshadu waxa ay u soo jeedinaysaa in ay istallaalaan dumarka uurka leh, dadka waayeelka ah ee ka weyn 65 jirka , bukaanka ay daciifka yihiin unugyada difaaca jidhkoodu iyo waliba dadka qaba wadne-xanuunka iyo cudurada ku dhaca sambabada iyo waliba xanuunada kale ee culus.
Si aad isku tallaasho waxaad si dhib yar ula xidhiidhi kartaa xarunta caafimaadka ee kuugu dhaw, adiga oo wakhti ka qabsanaya. Kharashka aad isku tallaalaysaa waa uu kala duwan yahay oo hadba waxa uu ku xidhan yahay degmada aad ku nooshahay. Waxaanu inta badan u dhexeeyaa 100 ilaa 180 karoon. Waxaa se jira maamulaha degmooyinka qaar tallaal bilaash ah u fidiya dadka uu soo rito hargabkani. Tallaalkan ayaa saamayn fiican qofka ku yeesha 14 cisho kadib marka qofku is tallaalo.